Mourinho: ‘Waxaanu xaq u lahayn laba rigoodhe’
HomeWararka MaantaMourinho: ‘Waxaanu xaq u lahayn laba rigoodhe’
Macalinka United Oo weeraray Garsoore Mark Clattenburg
Tabobaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa ku weeraray garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulanka Manchester Derby, inuu u qaban waayay rigoodheyaal cadaan ah iyo waliba kaadhadh casaan ah oo kulammaanaa.
Mourinho wuxuu rumaysan yahay in dagaalkii ba’anaa ee lagu legday weeraryahankiisa Weyne Rooney uu u qalmay in rigoodhe la dhigo, casaana lagu bixiyo.
Wuxuu kale oo ku duray garsoore Mark Clattenburg inuu iska indho tiray rigoodhe ay ahayd inuu ku abaal mariyo United markii kubbada uu si ogaan ah ugu qabtay Nicolas Otamendi, taas oo u muuqatay inay difaacyahanka City dhabarka kaga dhacday.
“Mark laba khalad oo waaweyn ayuu sameeyey. Claudio Bravo rigoodhe ayuu galay, casaan in lagu siiyona xaq buu u lahaa – Haddii mid kamid ah ciyaaryahanadaydu khalad noocaas oo kale ah ku galo diilinta ganaaxa dhexdeeda – ka soo qaad haddii midkood [Marouane] Fellaini ama Rooney ay diilinta ganaaxa falkaas oo kale ku dhex samayn lahaayeen – casaana wuu qaadan lahaa, kubbadana rigoodhe ayaa la dhigi lahaa,”ayuu yidhi tabobaraha reer Portaqiis.
“Diilinta dhexdeeda wey adag tahay in lagu qabto, isaguna ma doonayn inuu rigoodhahaas qabto.
“Ka labaad wuxuu ahaa kubbadii uu gacanta ku qabtay Otamendi – qaar kamid ah werfidiyeyaashu waxay lahaayeen ‘maaha ‘ maxaa yeelay dhabarka ayay kaga dhacday, laakiin isagu wuu ogaa. Kubbada si qumaati ah ayuu u eegayay. Kuma faraxsanin go’aamada noocan oo kale ah.”
Jose Mourinho Oo Casaankii Labaad Tarabuunka Loogu Diray Bil Gudeheed
Real Madrid Oo Xaqiijisay Inay Dib Usoo Iibsatay Morata
21/06/2016 Abdiwahab Ahmed
Nistelrooy Oo Kashifay Siro Ay Juventus Ku Xidhi Karto Messi, Neymar & Suarez
05/06/2015 Abdiwahab Ahmed